သတိမပြုမိကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက် မိဘတွေ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အနစ်နာခံမှု (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
သတိမပြုမိကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အတွက် မိဘတွေ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ အနစ်နာခံမှု (၁၀)ခု
Relationship တစ်ခုမှာ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမှု (၉)ခု
ပျင်းနေလား ? မပျင်းရအောင် ဒီနည်းလမ်း (၇)ချက်ကို စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်
ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်တည်းက သေခြင်းတရားနဲ့ ပက်သက်ပြီး သင်ပေးဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
ကလေးတွေရဲ့ ဝန်းကျင်မှာ ခန္ဓာကိုယ် အပြုသဘောဆောင်ခြင်းရဲ့ အရေးပါမှု
သားအတွက် ကျောပိုးအိတ်ဝယ်ဖို့ မတတ်နိုင်တာကြောင့် နှီးနဲ့ ကျောပိုးအိတ်ရက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဖေဖေ
အစာရှောင်စရာမလို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းသုံးသွယ်
RS တစ်ခု ပြတ်တောက်သွားအောင် မိန်းကလေးတွေ လုပ်တတ်တဲ့ အကြီးမားဆုံးအမှား ၃ ခု
ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းကို ဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်း
ကျော်ကြားသူတွေမှ စတင်ခဲ့တဲ့ Fashion Trend (၁၀)ခု
ဖုန်းအစွဲလွန်ရောဂါ Nomophobia ကို ဘယ်လိုကုသနိုင်မလဲ?
ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်နေတဲ့ ဒေါသစိတ်ကို ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ မိဘတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို တန်ဖိုးမထားဘဲ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားခဲ့ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ၊ မိဘနေရာကို ရောက်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိဘတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ အကြီးမားဆုံး ထောက်ပံ့သူတွေ ဖြစ်ကြောင်း နားလည် သဘောပေါက်လာပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ဖို့ များစွာသော အရာတွေကို ပျော်ရွင်စွာ စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သင့်ကို ယနေ့မှာ အံသြစရာကောင်းတဲ့သူအဖြစ် ပုံသွင်းဖို့ သင့်ရဲ့ မိဘတွေဟာ အခက်အခဲတွေ အများကြီး ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ မိဘတွေကို ပိုပြီးချစ်ဖို့ နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တွေ လိုအပ်မယ်ဆိုရင် မိဘတွေ လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ဒီအနစ်နာခံမှုလေးတွေကို သတိရလိုက်ပါ။
၁။ သူတို့ဟာ အဆိုးဆုံးအချိန်မှာ ရှိနေရင်တောင် သင့်ကို အကောင်းဆုံးရအောင် လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်
မိဘတွေ အတွက်တော့ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေဟာ အဓိကဖြစ်ပြီး သားသမီးတွေရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ အပြုံးတွေမြင်ရဖို့ ဘာမဆို လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဘာသာသူတို့ ပိုကောင်းတဲ့အရာတွေ၊ အသစ်တွေ ဝယ်မယ့်အစား သားသမီးတွေကို ဦးစားပေးနေရာမှာထားပြီး ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု ရှိကြတာ သေချာပါတယ်။
၂။ သင်အိမ်မက်ကြီးကြီးတွေ မက်နိုင်အောင် သူတို့ရဲ့ အိပ်စက်ချိန်တွေကို စွန့်လွတ်ခဲ့ကြပါတယ်
ကလေးတစ်ယောက်ရလာရင် မိဘတွေအတွက် အိပ်စက်ချိန်ဟာ လျော့နည်းလာပါတယ်။ မိသားစုဝင် အသစ်ဝင်လာတဲ့အခါ ငွေရေးကြေးရေးကအစ အဓိက အပြောင်းအလဲတစ်ချို့ ရှိလာပါတယ်။ ကလေးရတော့မယ့် မိဘတွေဟာ အနာဂတ်မှာ ကြုံရလိမ့်မယ့် ကုန်ကျစရိတ်တွေအတွက် ပိုက်ဆံပိုရှာဖို့ အလုပ်ပို ကြိုးစားလာရပါတယ်။ မွေးလာပြီဆိုရင်လည်း သားသမီးတွေရဲ့ ရှေ့ရေးအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်အတူ ညမအိပ်နိုင်တဲ့နေ့တွေ များခဲ့ရပါတယ်။
၃။ သူတို့ရဲ့ ဝါသနာတွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်
မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းဟာ အချိန်ပြည့် အလုပ်တစ်ခုနှင့် တူပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါ ကလေးကို ဂရုစိုက်ရတာ၊ သူတို့အတွက် အချိန်ကောင်းတွေ သုံးလိုက်ရတာ၊ သူတို့ကို သင်ကြားပေးရတာ စတဲ့ ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တော့တဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့ ဝါသနာတွေ ရှင်သန်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကလေးတစ်ယောက်ကို ကြိုဆိုတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ဝါသနာတွေကို အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်။
၄။ သင်နေမကောင်းတဲ့အခါ အရာအားလုံးကို စွန့်ခွာပြီး စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်
သင်နေမကောင်းတဲ့အခါ သူတို့ခေါင်းထဲ အလိုလိုပေါ်လာတာကတော့ သင့်အတွက် ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာပါပဲ။ သင့်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့၊ ဘာရောဂါမျိုးကိုမဆို ကုသပေးဖို့ သူတို့ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့ အရာအားလုံးကို ဆိုင်းငံ့ထားပြီး နေ့ရောညပါ သင့်အတွက် အချိန်ကုန်လွန်စေပါတယ်။
၅။ သူတို့ရဲ့ လူမှုရေးဘဝတွေကို ဘေးချိတ်ထားပြီး သင့်အတွက် အချိန်ပိုပေးခဲ့ရပါတယ်
မိဘတွေအနေနဲ့ ရေရှည်တည်မြဲပြီး လှပတဲ့ relationship တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် ကလေးတွေနှင့်အတူ အချိန်ဖြုန်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေဟာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတာ ၊ ပါတီတွေ သွားတာ၊ အပြင်မှာ နောက်ကျတဲ့အထိနေတာ စတဲ့ သူတို့ရဲ့ လူမှုဘဝကို ခဏဘေးဖယ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
၆။ သူတို့ဆာလောင်နေချိန်မှာတောင် ရှိတဲ့အစားအစာကို သင့်အတွက် ပေးခဲ့ကြပါတယ်
ဒီတစ်ခုက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် မိဘတွေက သင့်ကို ဘယ်တော့မှ ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် ကလေးတွေ အစားအစာတောင်းတဲ့အခါ မိဘတွေက သူတို့ရဲ့ဝေစုကို ကျွေးတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်အတွက်သာ လုံလောက်တဲ့ အစာဆိုရင်တောင် မိခင်တွေဟာ သားသမီးတွေကို ကျွေးပြီး ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ အိပ်ရာဝင်ပါလိမ့်မယ်။
၇။ Privacy ဟာ သူတို့မတတ်နိုင်တဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်း ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်
စုံတွဲတစ်တွဲအတွက် Privacyဟာ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ပြတင်းပေါက်နေ ထွက်သွားပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ နေရာတိုင်းမှာ မိဘတွေကို မေးခွန်းတွေလိုက်ပြီး မေးတတ်ကြသလို သူတို့နှင့်အတူ အမြဲအိပ်ဖို့ တောင်းဆိုတတ်ကြပါတယ်။ မိဘတွေဟာ ဒီအရာအားလုံးကို မေတ္တာဖြင့် လက်ခံခဲ့ ကြရပါတယ်။
၈။ သူတို့ဟာ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အကြီးအကျယ် ဖြုန်းတီးမယ့်အစား သင့်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် စုဆောင်းခဲ့ကြပါတယ်
ကျွန်တော်တို့တွေ အရွယ်ရောက်လာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် အလုပ်စလုပ်ရတဲ့အခါမှာ တကယ်တမ်းငွေရှာရတာက ဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ နားလည်လာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေဟာ မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့ စား၊ဝတ်၊နေရေးအတွက် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပြီး ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် အသုံးမချဘဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် စုဆောင်းခဲ့ကြပါတယ်။
၉။ သူတို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံးအရာတွေကို သင်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါ သူတို့တည်ငြိမ်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်
မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အများကြီး စိတ်ရှည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ စျေးကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ကိုယ့်ကလေးတွေ မတော်တဆ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာ၊ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြည့်နေချိန်မှာ သူတို့အကြိုက်ဆုံး ကာတွန်းလိုင်းကို ပြောင်းလိုက်တာ၊ ဧည့်သည်တွေရှေ့မှာ ကိုယ်ရဲ့ ရှက်ရွံ့စရာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ ဖောက်သည်ချတာ စသဖြင့် ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ မိဘတွေဟာ သူတို့အကြိုက်ဆုံးအရာကို သင်ဖျက်ဆီးလိုက်ရင်တောင် ဟန်ဆောင်ပြီး အဆင်ပြေပါတယ်လို့ သင့်ကို ပြောခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ သူတို့ရဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကို သင့်အတွက် ပုံပေးထားပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ရောက်လာတာနှင့်အမျှ မိဘတွေလောက် ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်သူကမှ ချစ်မြတ်နိုးမှာ မဟုတ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလာပါတယ်။ မိဘတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဘဝအစိတ်အပိုင်းကို ကလေးတွေ အတွက်သာ ရည်စူးထားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ချစ်လှစွာသော မိဘတွေကို နွေးထွေးစွာ ပွေ့ဖက်ပြီး သင့်အတွက် သူတို့လုပ်ပေးသမျှအရာအားလုံးကို သင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ ပြောပြလိုက်ပါ။
သတိမျပဳမိၾကေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အတြက္ မိဘေတြ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ အနစ္နာခံမႈ (၁၀)ခု
ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ားစုဟာ ငယ္႐ြယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘေတြရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို တန္ဖိုးမထားဘဲ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ သေဘာထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ၊ မိဘေနရာကို ေရာက္လာတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိဘေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဝမွာ အႀကီးမားဆုံး ေထာက္ပံ့သူေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ သေဘာေပါက္လာပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သူတို႔တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ဖို႔ မ်ားစြာေသာ အရာေတြကို ေပ်ာ္႐ြင္စြာ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သင့္ကို ယေန႔မွာ အံၾသစရာေကာင္းတဲ့သူအျဖစ္ ပုံသြင္းဖို႔ သင့္ရဲ႕ မိဘေတြဟာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ႀကဳံခဲ့ရပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ မိဘေတြကို ပိုၿပီးခ်စ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ မိဘေတြ လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ဒီအနစ္နာခံမႈေလးေတြကို သတိရလိုက္ပါ။
၁။ သူတို႔ဟာ အဆိုးဆုံးအခ်ိန္မွာ ရွိေနရင္ေတာင္ သင့္ကို အေကာင္းဆုံးရေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္
မိဘေတြ အတြက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြဟာ အဓိကျဖစ္ၿပီး သားသမီးေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေပၚမွာ အၿပဳံးေတြျမင္ရဖို႔ ဘာမဆို လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ပိုေကာင္းတဲ့အရာေတြ၊ အသစ္ေတြ ဝယ္မယ့္အစား သားသမီးေတြကို ဦးစားေပးေနရာမွာထားၿပီး ေက်နပ္ေရာင့္ရဲမႈ ရွိၾကတာ ေသခ်ာပါတယ္။
၂။ သင္အိမ္မက္ႀကီးႀကီးေတြ မက္ႏိုင္ေအာင္ သူတို႔ရဲ႕ အိပ္စက္မႈကို စြန္႔လြတ္ခဲ့ၾကပါတယ္
ကေလးတစ္ေယာက္ရလာရင္ မိဘေတြအတြက္ အိပ္စက္ခ်ိန္ဟာ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ မိသားစုဝင္ အသစ္ဝင္လာတဲ့အခါ ေငြေရးေၾကးေရးကအစ အဓိက အေျပာင္းအလဲတစ္ခ်ိဳ႕ ရွိလာပါတယ္။ ကေလးရေတာ့မယ့္ မိဘေတြဟာ အနာဂတ္မွာ ႀကဳံရလိမ့္မယ့္ ကုန္က်စရိတ္ေတြအတြက္ ပိုက္ဆံပိုရွာဖို႔ အလုပ္ပို ႀကိဳးစားလာရပါတယ္။ ေမြးလာၿပီဆိုရင္လည္း သားသမီးေတြရဲ႕ ေရွ႕ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္အတူ ညမအိပ္ႏိုင္တဲ့ေန႔ေတြ မ်ားခဲ့ရပါတယ္။
၃။ သူတို႔ရဲ႕ ဝါသနာေတြကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကပါတယ္
မိဘတစ္ေယာက္ျဖစ္ျခင္းဟာ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္တစ္ခုႏွင့္ တူပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကေလးတစ္ေယာက္ေမြးဖြားလာတဲ့အခါ ကေလးကို ဂ႐ုစိုက္ရတာ၊ သူတို႔အတြက္ အခ်ိန္ေကာင္းေတြ သုံးလိုက္ရတာ၊ သူတို႔ကို သင္ၾကားေပးရတာ စတဲ့ ဘယ္ေတာ့မွ မဆုံးႏိုင္ေတာ့တဲ့ ကိစၥေတြေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ဝါသနာေတြ ရွင္သန္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ႀကိဳဆိုတဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ဝါသနာေတြကို အဆုံးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။
၄။ သင္ေနမေကာင္းတဲ့အခါ အရာအားလုံးကို စြန္႔ခြာၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္
သင္ေနမေကာင္းတဲ့အခါ သူတို႔ေခါင္းထဲ အလိုလိုေပၚလာတာကေတာ့ သင့္အတြက္ ဘာမဆိုလုပ္ေပးမယ္ဆိုတာပါပဲ။ သင့္ကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ဖို႔၊ ဘာေရာဂါမ်ိဳးကိုမဆို ကုသေပးဖို႔ သူတို႔ဘဝမွာ အေရးပါတဲ့ အရာအားလုံးကို ဆိုင္းငံ့ထားၿပီး ေန႔ေရာညပါ သင့္အတြက္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစပါတယ္။
၅။ သူတို႔ရဲ႕ လူမႈေရးဘဝေတြကို ေဘးခ်ိတ္ထားၿပီး သင့္အတြက္ အခ်ိန္ပိုေပးခဲ့ရပါတယ္
မိဘေတြအေနနဲ႔ ေရရွည္တည္ၿမဲၿပီး လွပတဲ့ relationship တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ကေလးေတြႏွင့္အတူ အခ်ိန္ျဖဳန္းေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိဘေတြဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆုံတာ ၊ ပါတီေတြ သြားတာ၊ အျပင္မွာ ေနာက္က်တဲ့အထိေနတာ စတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ လူမႈဘဝကို ခဏေဘးဖယ္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။
၆။ သူတို႔ဆာေလာင္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ ရွိတဲ့အစားအစာကို သင့္အတြက္ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္
ဒီတစ္ခုက ပုဂၢိဳလ္ေရးအရျဖစ္ၿပီး အထူးသျဖင့္ မိဘေတြက သင့္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးေတြ အစားအစာေတာင္းတဲ့အခါ မိဘေတြက သူတို႔ရဲ႕ေဝစုကို ေကြၽးတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္သာ လုံေလာက္တဲ့ အစာဆိုရင္ေတာင္ မိခင္ေတြဟာ သားသမီးေတြကို ေကြၽးၿပီး ဗိုက္ေဟာင္းေလာင္းနဲ႔ အိပ္ရာဝင္ပါလိမ့္မယ္။
၇။ Privacy ဟာ သူတို႔မတတ္ႏိုင္တဲ့ ဇိမ္ခံပစၥည္း ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္
စုံတြဲတစ္တြဲအတြက္ Privacyဟာ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ျပတင္းေပါက္ေန ထြက္သြားပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ ေနရာတိုင္းမွာ မိဘေတြကို ေမးခြန္းေတြလိုက္ၿပီး ေမးတတ္ၾကသလို သူတို႔ႏွင့္အတူ အၿမဲအိပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ မိဘေတြဟာ ဒီအရာအားလုံးကို ေမတၱာျဖင့္ လက္ခံခဲ့ ၾကရပါတယ္။
၈။ သူတို႔ဟာ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ အႀကီးအက်ယ္ ျဖဳန္းတီးမယ့္အစား သင့္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကပါတယ္
ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ အ႐ြယ္ေရာက္လာၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္တိုင္ အလုပ္စလုပ္ရတဲ့အခါမွာ တကယ္တမ္းေငြရွာရတာက ဘယ္ေလာက္ခက္တယ္ဆိုတာ နားလည္လာၾကပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိဘေတြဟာ မိသားစုတစ္ခုလုံးရဲ႕ စား၊ဝတ္၊ေနေရးအတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ အသုံးမခ်ဘဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
၉။ သူတို႔ရဲ႕ အႀကိဳက္ဆုံးအရာေတြကို သင္ဖ်က္ဆီးလိုက္တဲ့အခါ သူတို႔တည္ၿငိမ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္
မိဘတစ္ေယာက္ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ အမ်ားႀကီး စိတ္ရွည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ေစ်းႀကီးတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ကိုယ့္ကေလးေတြ မေတာ္တဆ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္တာ၊ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲ ၾကည့္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔အႀကိဳက္ဆုံး ကာတြန္းလိုင္းကို ေျပာင္းလိုက္တာ၊ ဧည့္သည္ေတြေရွ႕မွာ ကိုယ္ရဲ႕ ရွက္႐ြံ႕စရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ ေဖာက္သည္ခ်တာ စသျဖင့္ ႀကဳံရႏိုင္ပါတယ္။ မိဘေတြဟာ သူတို႔အႀကိဳက္ဆုံးအရာကို သင္ဖ်က္ဆီးလိုက္ရင္ေတာင္ ဟန္ေဆာင္ၿပီး အဆင္ေျပပါတယ္လို႔ သင့္ကို ေျပာခဲ့ပါလိမ့္မယ္။
၁၀။ သူတို႔ရဲ႕ ႏွလုံးသားတစ္ခုလုံးကို သင့္အတြက္ ပုံေပးထားပါတယ္
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အ႐ြယ္ေရာက္လာတာႏွင့္အမွ် မိဘေတြေလာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ဘယ္သူကမွ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလာပါတယ္။ မိဘေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝအစိတ္အပိုင္းကို ကေလးေတြ အတြက္သာ ရည္စူးထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ခ်စ္လွစြာေသာ မိဘေတြကို ေႏြးေထြးစြာ ေပြ႕ဖက္ၿပီး သင့္အတြက္ သူတို႔လုပ္ေပးသမွ်အရာအားလုံးကို သင္ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးထားတယ္ဆိုတာ ေျပာျပလိုက္ပါ။
ကလေးတွေဟာ ရေမြှုပ်တွေလိုပါပဲ - မိဘတွေမှာ မြင်တွေ့ရသမျှ အရာအားလုံးကို သင်ယူကြပါတယ်။ မိဘတွေပြောသမျှကို နားထောင်တတ်ကြပြီး မိဘတွေ လုပ်သမျှကို တုပတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကို စိတ်ထဲမှာထားပြီး မိဘတွေအနေနဲ့ သားသမီးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့သာမက သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုနှင့်...
မိဘတွေရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ရဲ့ ဆက်နွယ်ချက်များ
ကလေးငယ်တဦးရဲ့ဘဝမှာ သူတို့ကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေများစွာရှိပါတယ်။ ပြဿနာတခုကို ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ မိဘတွေရဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပြဿနာတွေကိုလည်း ဒေါသတကြီးနဲ့ ဖြေရှင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို စိတ်ပညာရှင်များက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးစက်မှု(သို့) အတုမြင်သင်ယူမှုလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ မိဘတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုသည် ကလေးငယ်တွေရဲ့...
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှု သော့ချက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ
ကလေးငယ်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တဲ့အလုပ်ဟာမလွယ်ကူပါဘူး။ မိဘအုပ်ထိန်းမှုပုံစံမျိုးစုံရှိပေမယ့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုမျိုးကတော့ ပညာရှင်ဆန်ပြီး မိဘနဲ့ကလေးငယ်များအကြား ကောင်းမွန်တဲ့နှောင်ကြိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေသလို ကလေးငယ်တွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကို ပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးသော အခြေခံအုတ်မြစ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ သော့ချက်များ မိဘနဲ့သားသမီး အပြန်အလှန်လေးစားမှုမျိုး ထားရှိရပါမယ်။...
သင့်ကလေးက ခိုးတတ်တဲ့အကျင့်ရှိနေရင် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ
သင့်ကလေးခိုးနေတာကို တွေ့မြင်ရခြင်းက သင့်အတွက်အဆိုးရွားဆုံးအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေက ရွယ်တူချင်းဖိအားတွေ၊ ခိုးတယ်ဆိုတာ မကောင်းမှုမှန်းမသိလို့ခိုးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ကလေးတွေ ခိုးကြတာလဲ ကလေးတွေက မိဘတွေ၊ မောင်နှစ်မသားချင်းတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆွေမျိုးတွေထံမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပစ္စည်းပစ္စရာတွေကို ခိုးယူလေ့ရှိကြပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ ၁။...
ကမ္ဘာပေါ်က ပညာရှင်တွေ ဖွင့်ဆိုခဲ့တဲ့ အချစ် အမျိုးအစား ၇ မျိုး